Ogaden News Agency (ONA) – CWXO oo weeraro dhiigbax ah ku haya cadawga – Guusha Gobanimadoonkaa leh
CWXO oo weeraro dhiigbax ah ku haya cadawga – Guusha Gobanimadoonkaa leh
CWXO waxaa uu dagaalo joogto la gala ciidamada cadawga ee doolka iyo xooga ku jooga dalka Ogaadeenya, ujeedada dagaladan oo ah dalka iyo dadkaba laga xoreeyo gumaysiga dulsaaran.
Dagaaladan oo lagu gaadhsiiyay cadawga khasaare balaadhan oo naf iyo maalba ah islamrakaana lagaga furtay hub iyo saanada ciidan ayaa u kala dhacay sida soo socota;
– 3/1/2012 dagaal ka dhacay Ruqaayu oo ka tirsan degmada Dhagaxbuur waxaa ciidamada cadawga lagag dilay 5 askari waxaana lagagag dhawaacay 8 kale.
– 4/1/2012 waxaa deegaanka Hora-qaliifo oo ka tirsan degmada Qabribayax waxaa lagu kaarijiyay 2ba askari oo ahaa sirdoonka cadawga waxaana dhaawac ku baxsaday mid kale.
– 5/1/2012 dagaal mir ah oo ka dhacay Dhuure oo ka tirsan degmada Qabridahar waxaa cadawga lagaga dilay 2ba askaro.
– 13/1/2012 Dagaal ka dhacay Maramaydh oo ka tirsan degmada Garbo waxaa cadawga lagaga dilay hal askari 2ba kalana waa la dhawaacay. Waxaa sidoo kale gaadmo lagu dilay hal askri oo ciidanka cadawga ka tirsan degmada Shilaabo.
– 14/1/2012 dagaal ka dhacay meesha lagu magacaabobali Maraale oo ka tirsan deeganaka Araarso ee gobolka Jarareed waxaa cadawga lagaga dilay 2ba askari mid kalana waa lagagga dhawaacay.
– 14/1/2012 dagaal ka dhacay mar kale deegaanka Xuubcaaro oo degmada Dhagaxbuur ka tirsan waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 3ex kalana waa lagaga dhaawacay. Isla taariikhadan dagaal ka dhacay tuulada Tayin degmada Qabridahar waxaa ciidanka cadawga laga dilay 7 askari waxaana lagaga dhaawacay 5 askari.
Waxaa kale oo jira dagaalo badan, kuwaas oo dhacay xilliyo habeenimo ah. Dagaaladan mirta ah ayay dadkii ka agdhawaa deegaanada cadawga ay sheegeen in khasaare lagu soo gaadhsiiyay cadawga, inkastoo aanan wali ka helin faahfaahin dhamaystiran khasaaraha ka soo gaadhay cadawga dagaaladan mirta ah oo ka kala dhacay;
Gurucan,Doolo oo ka tirsan Qalaafo, Sangumar, Qarsoodi, Ananu, Garba-jiriso, Raad dooyo, Maygaaga, Haardhagax, Xamaro, Huusaale, Quman, Dhagaxmadaw, Reer miidaan, iyo Araweelo.
Wariyaha wakaaladda ONA ayaa ka xogwaramay weeraro kala duwan oy ku qaadeen CWXO kolanyadii ilaalada u ahayd dhiigyacab Cabdi iley meesha la yidhaadoBalisareedo 7dii bisha. dagaalkan oo ahaa mid si xifad leh loo agaasimay ayay dadkii deegaanku xaqiijiyeen in loogu gaystay khasaare balaadhan. Taariikhda marakay ahayd 9/1/2012 ayaa loo galay inta u dhaxaysa Gurucan iyo Ananu oo ka wada tirsan degmada Awaare. Mareegtan loo xidhay ayaa waxaa ugu horaynba danbas laga dhigay oo aan waxba ka bixin iyaga iyo wixii saaraa toona laba gaadhi oo tikniko ah. Sidoo kale waxaa cagta la mariyay tiro badan oo ka mid ah ciidankii loogu talagalay ilaalintiisa.
Dhanka kale waxaa jira dhibaatooyin soo gaadhay dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Xaaladan ayaa ka mid noqotay nolosha dadka shacabka, iyadoo ciidamada cadawga marka lagu soo jabiyo goobaha dagaalka ka aargoosta dadka shacabka ah oo qaarna soo kaxaysta oo xabsiyada dhiga, qaar kalena toogta ama jidh-dil u gaysta. Wararka ku saabsan waxyeelada shacabka ayaad kala socon kartaan idaacadaha.